२०७२ नेपाल नाकाबन्दी - विकिपिडिया
नेपालमा नाका बन्दीको असर
२०७२ नेपाल नाकाबन्दी विसं २०७२ आश्विन ०६ गतेबाट शुरु भएको थियो । यसले नेपालको जनजीबन तथा अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । नेपालको सरकारले यसलाई भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी भनेर उल्लेख गरेता पनि भारतले यस कुरालाई स्वीकार गरेको छैन ।
२ कसले र कसलाई ?
३ किन ?
४ कहिले बाट?
५ यो पनि हेरौँ
नाकाबन्दीको कारण ग्यासको अभाव भएपछी लाइनमा रहेका ग्यास सिलिण्डरहरू
नेपालको तराइ क्षेत्रमा संबिधान घोषणाको दिन नजिकिदै गर्दा तनाब र हिम्सात्मक गतिबिधीहरु बढ्दै गएका थिए । बिशेष गरी सिमान्कन का बिषयमा प्रमुख दलहरु र तराइकेन्द्रित दलहरुको बिबाद बढ्दै गैरहेको थियो । यही बिबादका माझ २०७२/०६/०३ संबिधानसभाबाट संबिधान जारी भयो । संबिधान जारी हुने बेलामा भारतबाट बिशेष दुत पठाएर आफ्नो चासो र चिन्ता ब्यक्त गर्ने काम भयो । तराइको सीमामा सुरक्षाको कारण देखाएर मालबाहक साधनहरु बिशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीहरुलाई जाचपासमा कडाइ गर्ने काम सुरु भयो । यसरी नेपालमाथि भारतले अघोशित नाकाबन्दी लगाएको हो ।
कसले र कसलाई ?[सम्पादन गर्ने]
यसपछि सिमा सुरक्षको बिषय बनाएर विश्वकै एक बिशाल प्रजारतांत्रिक मुलुक भारतले अघोषित नाक बंदी गर्यो तर मुखमा मधेसी दललाई राख्यो।
किन ?[सम्पादन गर्ने]
भारतले संबिधान घोषणामा केहीसाता पर्खन आग्रहको लागि आफ्ना बिशेष दुतहरु नेपाल पठाएको थियो ।  सो कुराप्रति नेपाल असहमत भएर तोकिएको समयमै संबिधान घोषणा गरेको कारणका साथै नेपालको तराइको सिमाबर्ती क्षेत्रहरुमा भै रहेको तनाब र हिम्सात्मक गतिबिधी प्रमुख कारणका रुपमा रहेको पाइन्छ । हिन्दु अधिराज्यकाे घाेषणा या धर्म निरपेक्ष शब्दकाे खारेजी वा नेपालकाे संबिधान भारतकाे बिहार राज्यकाे चुनाबपछाडी घाेषणा नगरिएकाेले नाकाबन्दी लगाइएकाे हाे । 
कहिले बाट?[सम्पादन गर्ने]
२०७२/०६/०६ गतेदेखी भारतले नेपालमा अघोशित नाकाबन्दी लगाएको हो । 
नाकाबन्दीकाे बारेका लेख फेसबुकबाट गायब
भारतीय बरिषठ पत्रकार बिशाल अराेराले भारतले नेपालमाथि लगाएकाे नाकाबन्दी बिरुद्ध फेसबुकमा लेखेकाे लेख फेसबुकले सेन्सर गरेको छ । "आर आइ पि ईन्डियाज इन्फ्लुयन्स अन नेपाल" शिर्शकको सो लेख फेसबुकले सेन्सर गरेको हो । जुन लेखलाई नेपाल तथा भारतका ३००० भन्दा बढी नागरिकले सामाजिक सन्जालमा शेयर गरेका थिए ।
↑ "भारतले नाकाबन्दी गरेकै होः माधव नेपाल", www.onlinekhabar.com, अनलाइनखबर डटकम, अन्तिम पहुँच २०७२ मङ्सिर १०।
↑ "नाकाबन्दी इन्कार गर्दै भारतले भन्यो- हामीलाई होइन, नेपाल सरकारलाई नै सोध", www.onlinekhabar.com, अनलाइनखबर डटकम, अन्तिम पहुँच २०७२ मङ्सिर ०३।
↑  "बीबीसी नेपाली"
↑ "पाँच हजार बढी गाडी भारतीय भूमिमा अलपत्र" , "Bizmandu" Sep 27 2015
↑ काशीराम ढुंगाना, "स्वतन्त्र नेपाल र छिमेकी भारतको चाहना", "राताेपाटी"
↑ धर्मेन्द्र बास्तोला, "संसदवादीलाई माओवादीको प्रश्न : कसरी बन्ला भारतसँग मित्रता ?", "अनलाइनखबर"२०७२ मंसिर २८ गते १२:३०
↑ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, "पटकपटक नाकाबन्दी", सेतोपाटी बिहीबार, आश्विन १४, २०७२ ११:१९:३१
↑ अनलाइनखबर, "नाकाबन्दीबारे अरोराको लेख फेसबुकबाट 'गायब, "अनलाइनखबर" २०७२ मंसिर ११ गते १९:२८
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=२०७२_नेपाल_नाकाबन्दी&oldid=671930" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:१२, २९ अगस्त २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।